Gudoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada mudane Cabdullahi Cali watiin iyo kan gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullahi Maxamed ayaa waxa ay manta dhagax dhigeen wado dhirirkeedo yahay 500 mitir oo dhaxmerto magaalada Baydhabo xaafadaheeda Xafad ka mid ah gaar ahaan Xafada Isha.
Monday December 14, 2015 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO YOUR FRIEND
Mashruuca dib looga dhisayo wadada ayaa waxaa maalgaliye dowlada ingiriiska ayada oo ay shirkad maxali ahna dhisayso sidoo kale Iskaashatada Gaadiidka degmada Baydhabo ayaa waxa ay balan qaadeen inay dhismaha wadada ka gaysan doonaan intii karaankoda ah ayaga oo gaar ahaan ka qeyb qaadanayo soo daabulida Carada Iyo Dhagxaanta wadada lagu dhisayo, waxaa wadadaan laga dhigayaa Laami oo ay markeedii horeba ahaan jiray.
Gudoomiyaha degmada baydhabo ayaa waxa uu xooga saaray tan iyo markii lamagcabay wax ka qabashada Arimaha Bulshada isaga oo kaashanayo bulshada magaalada Baydhabo ,gudoomiyasha Xaafadaha, ganacsatada iyo maamulka Gobolka Bay.
Gudoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada mudane cabdullahi cali watiin iyo gobolka bay kan cabdirashiid cabdullahi maxamed ayaa waxa ay manta dhagax dhigeen wado dhirirkeedo yahay 500 mitir oo dhaxmerto magaalada baydhabo xaafadaheeda xafad ka mid ah gaar ahaan xafada isha.
Mashruuca Dib looga dhisayo wadada ayaa waxaa maalgaliye dowlada ingiriiska ayada oo ay shirkad maxali ahna dhisayso sidoo I iskaashatada gaadiidka degmada baydhabo ayaa waxa ay balan qaadeen inay dhismaha wadada ka gaysan doonaan intii karaankoda ah ayaga oo gaar ahaan ka qeyb qaadanayo soo daabulida carada iyo dhagxaanta wadada Lagu Dhisayo, waxaa laga wadadaan dhigayaa laami oo ay markeedii horeba ahaan jiray.
Gudoomiyaha degmada baydhabo ayaa waxa uu xooga saaray tan iyo markii lamagcabay wax ka qabashada arimaha bulshada isaga oo kaashanayo bulshada magaalada baydhabo, gudoomiyasha xaafadaha, ganacsatada maamulka iyo gobolka bay
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo Beeniyay Inuu Xaruntii Hore ee Baarlamaanka...
Wiil 12 jir ah oo layiraahdoa Cabdi Caziiz Nur Adan ayaa lugtiisa waxay...
© Copy Right Warmoley 2013 - 2021 All Rights Reserved Site Designed & Developed by: Ileys Inc.